Gooseberry | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny tombontsoa sy ny fahasimbana eo amin'ny haizim-pito, toy ny voankazo dia manimba ny fahasalaman'ny olombelona
Tsy ny rehetra no mahafantatra ny tombontsoa sy ny fomba maro ampiasaina ny gooseberries, fa ity berry ity kosa dia fitaovana mamy ho an'ny lovia, ny fitsaboana voajanahary ary ny fitaovam-pako ho an'ny fikajiana voajanahary. Ny akora simika avy amin'ny Gooseberry any avaratra, izay antsoina koa hoe "agrus" sy "voaloboka any avaratra", dia ny karazana Currant.
Fomba hanamboaran-doha amin'ny ririnina, fomba mahazatra
Amin'ny lohataona sy ny fararano, ny natiora dia manome antsika be dia be, voankazo sy legioma be dia be, ary mba hankafizana ny tsirony amin'ny ririnina, ny olona dia tonga amin'ny fomba isan-karazany mba hitahiry azy ireo. Be dia be ny vitaminina sy ny vovo-dronono misy voankazo gooseberry, ny fanangonana azy dia manomboka amin'ny faran'ny Jolay - ny voalohandohan'ny volana aogositra. Hatramin'ny andro fahiny, ny gooseberries dia voavidy noho ny tombontsoa sy ny tsirony tsara.
Ahoana ny fomba hanangonam-bozaka: ny fomba fitsaboana arahim-borona indrindra
Gooseberry dia zavamaniry mahazatra izay hita any amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao: tsy ao amin'ny faritra misy anay, fa any Amerika, ary na any Afrika aza. Ny lazany dia noho ny vokatra mahasoa avy amin'ny voankazo izay tsy mihinana afa-tsy vaovao, fa voajanahary ihany koa amin'ny endriky ny fifangaroan-dranomamy.
Ahoana no hanangonam-bozaka ao an-trano: dingana isan-karazany amin'ny sary
Rehefa miaro ny legioma sy ny voankazo amin'ny ririnina, dia maro ny antony mahatonga azy ireo hivezivezy, na dia mamoaka tsaramaso marika tena tsara aza izany. Amin'ny fomba azo atao hametahana ity vokatra ity, ny fomba fisakafoanana sy ny endriky ny fikojakojana ny voankazo, dia hodinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity. Fikarakarana fiterahana Ho an'ny fambolena amin'ny ririnina dia zava-dehibe ny mampiasa be-peon-boninkazo tsara indrindra - tokony ho matanjaka, boribory, tsy misy fahasimbana sy alaina.
Ahoana no fanaovana saosy gooseberry ao an-trano: fisafidianana karazan-tsakafo ho an'ny hena na trondro
Mandritra ny roapolo taona mahery, ny katsaka sy ny chops dia mihinana ketchup, mayonnaise, orkard na adjika. Saingy indraindray ianao dia mila zavatra vaovao. Raha te hanova ny menio ianao dia atombohy amin'ny sauce. Tsy mahandro avy amin'ny voatabia, fa avy amin'ny gooseberries, dia hahatonga ny sakafo hena mahazatra indrindra tsy mahazatra sy tena tsara.
Ahoana ny fomba hanamboaran-dravina: dingana isan-karazany amin'ny sary
Tia mankafy jambon-tsakafo amin'ny ririnina isika rehetra. Ho an'ny fanomanana azy dia misy voankazo sy voankazo samihafa. Ny lahatsoratra dia hanolotra safidy maromaro ho an'ny fifangaroan-drivotra, araka izay hahafahan'ny olon-drehetra afaka mahandro ity sakafo matsiro ity ao an-trano. Fikarakarana ny herisetra Ny fiandohan'ny fihinanana dia zava-dehibe iray - ny fanomanana ny voankazo.
Ahoana ny fomba hanamboarana divay an-trano
Misy karazana zava-pisotro misy alikaola. Ny sasany amin'izy ireo dia natao hamonoana ny hetahetany, ny hafa, ny mifanohitra amin'izany, dia ampiasaina amin'ny voka-dratsiny. Misy zava-pisotro misy alikaola toy izany. Ny zava-pisotro misy alikaola dia vita amin'ny fitaovana voajanahary voajanahary, izay ahitana ny siramamy. Mandritra ny fivalozana, dia mihintsana any anaty rafitra tsotra izy ireo ary mamokatra toaka, anisan'izany ny ethyl.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Gooseberry